Ukutyelelwa kweMigodi ye-Entremares-eGeofumadas
Ukutyelela umgodi we-Entremares
Meyi, 2010 Uhambo
Uhambo lwam luphelile, ndidiniwe kodwa ndinesiqhamo. Ukujongana nemimandla emitsha, ixesha lokuhlekisa, kunye nokuzisola ngokucinga amantshontsho enza imatriki kunye nomsebenzi wasekhaya wesiNgesi ngokusemandleni abo.
Eyona nto inomdla, ihotele apho bendihleli khona, ngaphandle kwedama lokuqubha, i-lagoon ehamba ngeenqanawa kunye namahashe amahashe abantwana, inikezela ukhenketho lwezinto ezazikhona kumgodi. Ngokubanzi umntu ucinga iklasikhi ngetonela, kwisitayile esenziwe yiSpanish ngexesha lokoyisa, kodwa olu hlobo lwezixhobo ziqhelekile xa kufakwa idipozithi yegolide kwi-beta. Kule meko, ngenxa yokuba ichithakele, yenziwa kwindawo evulekileyo, isila izinto, iphinda iphinde ibuye ne-cyanide eyixuba emanzini.
Ngumba ophikisanayo phakathi kwezendalo ezamdubula zambulala kunye nososayensi abakhusela ulawulo lokunciphisa. Kwakhona iintlekele kwezinye iindawo zehlabathi yinto engalibalekiyo, kodwa abezopolitiko bahlala benetyala ngezinto ezimbi (ngokuvumela okanye ngokuthetha-thethana okanye ngokungazi kakuhle ukuba batyikitye ntoni) bandixelele ukuba ndikhulele edolophini igama, apho lonke usapho lwahlulwe ngegolide endize ndacinga ukuba aluzange lubekho ngobuninzi obunje.
Kwifoto, indawo ekwinkqubo yokubuyiselwa kwethambeka. Unokubona apha ngasentla ukuba indalo ibuyela njani kwinjongo yayo.
Ukutyelela kule ndawo kuyafundisa, ngakumbi kwezi ntsuku igolide ifikelele kwirekhodi, ngaphezulu kwe-1,200. Kwaye ukuba igolide yinto engaqondakaliyo, siyamangaliswa ATM (ATM) evulekileyo e-Dubai, apho ufaka i-dollar ye-450 kwaye umatshini abuyisela ibha yegolide.
Kodwa yenza ucacelwe ngoba ngaphandle umdla ekhobokisayo, ingabi iphepha manzi ezifana bonds, yaye ixabiso layo ayikho njengokukhazimla entanyeni yentombazana kodwa amandla abo ukuba kude emhlabeni, zasuka zanyibilika bamngcwabela-kwakhona ezindaweni pele loqoqosho.
Kwigrafu, u-Palo Alto unqumle, uphendu olufanayo ukusuka phezulu, kodwa wajoyina Kodak EasyShare. Sele kwinkqubo yokubuyiselwa. Iimbono zibekwe ukuba ziphumle okwethutyana, zithathe imifanekiso, zifunde ngembali okanye nencasa iAmaretto elungileyo.
Le ndawo inemifanekiso, iicawa zamandulo zikhumbula ifa elifanelekile ukulondoloza.
Ukuba ezi dolophu zisebenzisa ithuba lokudibanisa kunye nezixeko zaseSpain, umsebenzi onomdla unokwenziwa. Jonga ngasemva indlela intaba ebonakala ngayo ngaphezulu kwenkungu emva kwemvula eyishiye ifika, embindini wentili ngentsimbi yesibini emva kwemini.
Kwigrafu esezantsi, ilifa lembali yakutshanje. Imiyalezo ebhalwe ngu Ukumelana neZelayista ngexesha lokubhikishwa kombuso, ukulandelelana komgaqo-siseko ... okanye njengoko kubonakala kukulungele ukuyibiza.
Kwifoto elandelayo isampulu yomhlaba, ingxangxasi yamanzi ashushu, nevumba leqanda elibolileyo lesalfure. Kwifoto yasekunene, ukusondela, jonga ukuba inika njani umbono wokuba yizinkuni. Kodwa zizinto ezidityanisiweyo zohlobo lwe-laminar, -ngokutsho kwesikhokelo- bomhlaba obomvu kunye nemithombo eshushu eneempawu ezithile zediphozithi yegolide. Ukuba unomhlaba onezi mpawu, ndixelele :).
Indawo enomdla wokuchitha iveki kunye nosapho. Ndiyincoma.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Dweba kwi-Intanethi kwiGoogle Maps
Post Next I-GPS Promark 3, uluvo lokuqalaOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-4 "kwi-Entremares Mine Tour"
URafael Fernández Rubio (Spain) uthi:
Ndiyifumana yonke into oyitshilo kakhulu, ndingathanda ukutshintshanisa iifoto. Ndayazi indawo apho i-mine yayisebenza ngokupheleleyo.
OleTusHuevos 2.0 uthi:
Andazi ukuba imeko yentsingiselo yathatyathwa phi ngoba uguqulelo lwangempela luya kuba - njengoko omnye esitsho - intetho yesiNgesi "Kulungile kuwe." 🙂
Iindleko zeehotele: US $ 30 ngobusuku bonke, indleko yesidlo sasekuseni: US $ 2 (ifakwe kwigumbi), indleko yokutya: US $ 3.
Ndingathanda ukubona amagosa aneendleko zokuphila.
Kwaye bekuza kuba yinto yokuzingca ukubona indawo ekhangayo, engabizi kwaye ayikhuthazi njengamava amahle.
Ukuphepha ukungaqondani umongo, Ndiyathetha i-mine entremares, kungekhona Ihotele ihotele.
Indlela ohlala ngayo !!!! Ngaba ungosemthethweni?